Maitiro ekudzora kurara neako Apple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekudzora kurara neako Apple Watch
Luis Padilla | | IPhone maapplication, Apple Watch
Chimwe chinhu chinoshayikwa nevashandisi vazhinji nezveApple Watch kugona kurara. Nepo mamwe mabhanhire ekuverengera achipa chinhu ichi seyakajairwa, iyo Apple Watch haisanganisi, pasina mubvunzo nekuda kweimwe yeakanyanya kukwana: bhatiri. Iyo Apple Watch kubva kwayakatangira yaifanira kubhadhariswa zuva nezuva, uye vazhinji vedu tinosarudza kuzviita isu takarara. Nekudaro, zvinhu zvinoshanduka zvakanyanya nezera idzva remawachi eApple, nekuti ese ari maviri Apple Watch S1 uye iyo S2 inokutendera iwe kusvina bhatiri rako kwemazuva maviri. Isu tinotsanangura maitiro ekutarisa kurara neako Apple Watch
1 Imwe tsika yekuitakudza
2 Chechitatu bato zvikumbiro
Imwe tsika yekuitakudza
Chinhu chekutanga kushandura maitiro paunenge uchiraja wachi, nekuti kunyatso kugona kuongorora kurara kwako nenzira isingatendeseki zvakafanira kuti iwe uzvipfeke, kuti usazokwanisa kuisiya usiku pa tafura yemubhedha. yakaiswa panzvimbo yayo yekuchaja. Ndinochaja riini ipapo? Iyo yakanaka zvinoenderana nemiyedzo yangu ndeyekuzviita kaviri: mangwanani paunomuka paunenge uchigadzirira kubuda mumba uye manheru, usati warara.. Nenzira iyi, paunenge uchidya kudya kwemangwanani, kugeza uye kupfeka, wachi yacho ichadzoreredza uye husiku, paunenge ugere wakanyarara pasofa uchinakidzwa neyaunofarira nhevedzano, inozadza zvakare bhatiri. Saka iwe unogona kupfeka wachi kana ichinyatso kubatsira: zuva rese, tarisa zvaunoita uye husiku iwe uchakarara.
Chechitatu bato zvikumbiro
Ikozvino hapana chekuzvarwa pachishandiswa paApple Watch inoona nezve kuongorora kurara (chikumbiro changu cheWatchOS 4). Asi App Store izere navo, vamwe vakasununguka. Takasarudza dzinonakidza kwazvo kuti iwe uzviedze wega, kunyangwe ini ndichisarudza yekutanga: Kurara Auto. Ehezve, ngakurege kuva nemunhu anofunga kuti iyo data yakawanikwa iri padhuze neizvo zvinogona kuwanikwa mukutarisisa chaiko nezvakanangana nemishonga yezvokurapa, kunyangwe izvi zvisiri izvo kune vazhinji.
Iyo app iyo inopa yakajeka mhedzisiro, uye iyo kunyange inokupa iwe sarudzo yekusapfeka wachi, kunyange zviri pachena mune izvo zviitiko mhedzisiro yacho haina kunyanyo tsanangurwa. Iyo inozviona yega kana iwe uchizorara zvichibva pakufamba kweiyo iPhone yako neApple Watch uye inoshandisa iyo data rese iro iro wachi rinounganidza roga kuti rione kurara kwako, senge kufamba uye kurova kwemoyo. Uye zvese izvi pasina application yakaiswa pawatch, saka panenge pasisina chiitiko chekumashure chinouraya bhatiri reApple Watch yako. Izvo zvinoshamisa chaizvo uye ini ndinofunga inokodzera mutengo wayo.
Iyo yemahara app iyo zvakare inopa yakanaka kwazvo mhedzisiro, isina yakawandisa data senge yapfuura iyo, asi inopfuura yakaringana kune vazhinji vashandisi vanongoda chete yakakosha yekutarisa. Inoisa chishandiso paApple Watch, uye unofanira kuratidza paunorara uye paunomuka.
Ichi chishandiso chinopa yakadzama data, kunyangwe kune izvi zvakafanira tenga chishongedzo iyo inoona kufamba mumubhedha wedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekudzora kurara neako Apple Watch
Ini ndinoda Piro uye Kurara zvirinani zvirinani, iyo yekupedzisira inozvizivisa pachayo paunorara
Pindura kune cibermusic
Zvakanaka zvinoenderana shamwari, nekuti kana mangwanani ukasashamba uye husiku uchinonoka kudzoka kumba uye usingaone chero nhevedzano, ipapo uchandiudza kana uchinge waisa. Huyai… kutanga kubva pamuenzaniso kuti uverenge kurara zvinoenderana neupenyu hwako hwezuva nezuva uye nesarudzo dzako / kurodha mikana… jira rakadii…
Keko jones akadaro
Mushure mekuyedza akati wandei (kunze kwekurara Auto), ndakagara nePiro, kwandiri ndiyo yakanyanya kunaka. Ini ndoda kuyedza AutoSleep, asi ndinotya kubhadhara € 3 kuti ndirege kuifarira gare gare.
Pindura Keko Jones
Ndakaedza kurara ndikarara uye bhatiri rekushandisa rinobuda. Mushure mekuyedza akasiyana siyana marongero, akabviswa pazuva rechitatu. € 3 mumarara.
Pindura Toni C.
Iwo akanakisa manyorerwo ekutsvaga basa kubva kune yako iPhone